Tele RELAY တစ်ခု - သငျထိနျးခြုပျဆက်ဆံရေးအတွက်နေကိုဘယ်လိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်မှ
မူလစာမျက်နှာ » လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေး "သင်ထိန်းချုပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်နေကိုဘယ်လိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်မှ
Teddy Oben 10 မတ်လ 2019
ထိန်းချုပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုကြီးမားအလေးချိန်သင့်အပေါ်မှာကျနှိမ်နင်းနေသည်နှင့်တူခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင်၌ hemmed နှင့်-ရှိကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်နေရာမှာနေသော်လည်းအဖြစ် Feeling သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပေါင်းစပ် cuckold သင်တို့အပေါ်မှာသို့မဟုတ်မရှိပါတယ်ရတယ်ထားပါတယ်ရှိမရှိသံသယမှစတင်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောနိုင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မျှော်လင့်ချက်ရှိသေး၏။ ငါတို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုသင်အဖြူထိန်းချုပ်ထားဖြစ်ခြင်းများနှင့်ဘယ်လိုမှိုကိုချိုးဖျက်ဖို့ဆိုရင်အထဲကရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်အတူတူထားပါတယ်။
ဤအကြောင်းအရာသည်ယင်းအစားသိသာ sccm နိုင်ပါစေ, ရည်မှန်းချက်ကိုထိန်းချုပ်လူတစ်ဦးကိုသင်ကျော်သူတို့ကြီးစိုးပြပွဲရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ အတော်လေးဖြစ်နိုင်ပါသည်သူတို့ဟာထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြီဘယ်မှာသူတို့၏ဘဝ၌အခြားသောဧရိယာ Reviews ကနေအဓိကအားထားကိုသင်ဒါကသင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအစိုးရကိုသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ရဲ့လိုအပ်ချက်အသိအမှတ်ပြု Log ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့သည်အထပ်ထပ်အလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်အလားအလာငွေရေးကြေးရေးရုန်းကန်ရှာဖွေလျက်နေကြသနည်း သူတို့လည်းအလွယ်တကူအရှုံးမပေးသလား? တခါတရံမှာသူတို့ကဖြစ်နိုင်သလား စိတ်ခံစားမှုကိုမရရှိနိုင်? သူတို့ကသူတို့အမှားတွေကိုဘို့အခြားသူတွေပေါ်သို့အပြစ်တင် assign မှအမြန်ဖြစ်ပါသလား သငျသညျ coercing အသုံးပြုပုံသူတို့ဟာသူတို့ဘဝခုနှစ်တွင်အာဏာကိုနည်းနည်းပြန်ကွေ။
ထိန်းချုပ်ခြင်းလူတွေအထူးသဖြင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအသေးအဖွဲ sccm ဆိုလိုသည်မှာအရာကျော်တစ်ဦးအာဃာတကျင်းပရန်ကိုချစ်။ သူတို့ကသငျသညျအလွန်လွယ်ကူစွာပြောပါအမှုအရာမှပြစ်မှုယူအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သြနိုင်ပါစေ; တောင်မှ em တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်နိုင်ပါစေ '' အကူအညီတောငျး။ အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့ကျရောက်နေတဲ့တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ကောင်းအမျက်ဒေါသအများကြီး internalized ကြောင့်, သင်ပေါ်သို့သည့်ခါးသီးမှုနှင့်နာကြည်းကထွက်ခွင့် (နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၌သင်တို့ကိုနာကျင်) ၏သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အဖြစ်မြဲအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သြဝေဖန်မှုကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်ပါတယ်။ မဆုတ်မနစ်အဖြူနောက်ဆုံးတော့သင်ဟာသင့်ကိုယ်သင်သံသယ start ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးပွိုင့်ရန်သင့် Self-တန်ဖိုးရှိ erodes ပါလိမ့်မယ်သင်တချို့ကပုံသဏ္ဍာန်သို့မဟုတ်ပုံစံခုနှစ်တွင်အလုံအလောက်ကောင်းသောသို့မဟုတ်လစ်လပ်မဟုတ်ပါဘူးပြောသည်ခံရ။
အဆက်မပြတ်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မ သငျသညျမကောင်းတဲ့ခံစားရပါစေ သင့်ရဲ့စျြဆုံးနှင့်အနီးဆုံး '' နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းကော? သင်သူ့ကို entre / သူမ၏နှင့် em ကောက်နဲ့ရွေးချယ်ဖို့အဖြူရောင်အတင်းအဓမ္မခံရပါတယ်ခံစားရပါသလား? ဒါကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆက်ဆံရေးအသုံးအများဆုံး signifiers တဦးဖြစ်ပါသည်, သေးမကြာခဏကလစျြလြူရှုဖို့အလွယ်ကူဆုံးပါပဲ။ ဒါဟာသင်ကဆက်ဆံရေးအသစ်ရဲ့ "ပျားရည်ဆမ်းခရီးကာလ," ပုံမှန်တွင်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုမြင်လျှင်ခဏနောက်ကျောအဖုံးကိုယူနိုင်ပါသည်အတွက် ensconced နေတဲ့အခါမှာအဲဒီစစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။ ရည်ရွယ်ချက်ဒါကအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုသင်အနီးဆုံးနေကိုလူထံမှသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်နေသည်တွေးသို့ duped မရကြဘူး။ သင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကိုသယ်ဆောင်ကွာချွတ်ပြီးနည်းလမ်းလူတစ်ဦးသူတို့ကသင်က Want သင်သည်အဘယ်မှာအသုံးပြုမှုကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတစ်ဦးကျောင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
obsessive စောင့်ကြည့်မှုထိနျးခြုပျဆက်ဆံရေးအခြားထဲလ်-ပုံပြင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအတော်လေးစိတ်ပျက်စရာနိုင်ပါတယ်ဒါကတစ်ခုခုကိုစတေးလျပါပဲ။ အဖြူဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ခြေရာခံသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုချက်ချင်းအချိန်အူနှိုးဆော်သံခေါင်းလောင်းထိုးသတ်မှတ်ထားသင့်တယ်သည် Feeling ။ မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပိုလျှို့ဝှက်ချဉ်းကပ်နည်းကိုရွှေများအတွက် opts ရှိမရှိ၏သင်ကလုံးဝကိုသင်သည်းခံ shoulds အဘယ်အရာကိုကျော်လွန်ခေါ်ဆိုပါရဲ့, 'em အရာရာပြောပြရမယ်အာဒံဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးနဲ့ Snooping ဖွဲ့စည်း, သင့်ရဲ့ဖုန်းကတဆင့်စစ်ဆေးနေသင်၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်ပေါ်သို့ logging, သင်၏အီးမေးလ်များမှတဆင့် trawling ။ သူတို့ကသူတို့ဟာယုံကြည်မှုနှင့်အတူရွှေရှိတယ်ပြဿနာများမတိုင်မီလှည့်ဖြားခဲ့တာကြောင့် '' em သင် policing အပေါ်စောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အရုံဦးခေါင်းရဲ့သင်ပြောပြလိုက်တဲ့အခါဒါဟာသို့မဝယ်ပါနဲ့။
ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကခြင်းမှာမှကြွလာသောအခါအပြစ်ရှိတယ်လို့တစ်အစွမ်းထက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, ထိုသို့ထိန်းချုပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ရှားပါးသောဝေးအမြင်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအမှားတစ်ခုခုပြုမိပါဘူးတဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့တစ် Pang ကြုံနေရကဖြေရှင်းပေးရန်ငှါရှာကြံအတိုင်း, သာမန်ဖြစ်ပါတယ် (သင်လွှတ်လိုက်လက်ခံရရှိသောပေါ်မှာဆိုရင်လျှင်ခွင့်လွှတ်!) ။ ဤသည်ရည်မှန်းချက်အပြစ်ရှိတယ်လို့တစ်ခြယ်လှယ်အဘို့အလည်ပတ်သောဘယ်လိုမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကထိန်းချုပ်ထားလူတစ်သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်သူတို့ဟာ Do. အရာအားလုံးတို့အတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရစေမည် ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းဒီ '' စွပ်စွဲချက် '' မိတ်ဖက်အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့-inducing အခြေအနေများရှောငျပါမညျအဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအနေအထားမှဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်။ လူအများကစိတ်ခံစားမှု inertia ထို့ကြောင့်ကြီးစိုး၏ထိန်းချုပ်လူတစ်ဦးရဲ့အနေအထားကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဒါဟာသင်အပေါ်အပြစ်တင်ချပြီးမှကြွလာသောအခါတစ်ဦးကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမိတ်ဖက်တစ်ဦးလိုလားသူဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ကျောကိုကြည့်ရှိသည်နှင့်သင်-ကြနိုင်ပါစေခဲ့ငြင်းခုံ၏ရလဒ်ကိုအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါ။ သငျသညျအစဉ်စွဲအမှားမှာခံစားရစေပါသလား? နှစ်ချက်စံချိန်စံညွှန်းများဆက်ဆံရေး၏ဝေစုကိုထိန်းချုပ်ထားကြသည်; တဦးတည်း em ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များအဘို့စည်းမျဉ်းနှင့်အသင်တို့အဘို့အခြားအမြားအဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ non-ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သဘောထားပိုပြီးဆိုရင်သင်နှိမ်ဖို့ပဋိပက္ခသုံးပြီးသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သတိထားမိနိုင်ပါစေ။ ထိန်းချုပ်ခြင်းလူတွေကများသောအားဖြင့်သဘောမတူညီမှုသင့်ရဲ့သန်နိဋ်ဌာနျမှာကွာ chip အသုံးပြုပါလိမ့်မယ် argument နှင့်အစုလိုက်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။